Dibada | Radio Himilo
Home / Dibada
Vidal oo ugu danbeyn si xor ah ugu biiraya Inter Milan
Sadia Nour 14 days ago
Himilo – Sida ay ku waramayaan warbaahinnada Italy, Arturo Vidal ayaa wada-xaajood lagalay isaga oo soo gababeyay heshiiskiisa Barcelona habeenkii xalay, taasi oo ka dhigan in saacadaha soo aadan uu tijaabada caafimaad u mari doono kooxda Inter Milan. Khadka dhexe ...
Barcelona oo dalabkii ugu danbeeyay u gudbineysa Inter si ay ula saxiixato Lautaro Martinez
Sadia Nour 16 days ago
Himilo – Barcelona ayaa ku jirta isu diyaarintii ugu danbeysay oo ay ku dalbanaayaan weeraryahanka Inter Milan ninka lagu magacaabo Lautaro Martinez, kaasi oo ay doonayaan in lasoo gabagabeeyo isbuucaan. Sida ay werineyso Goal.com, Blaugrana ayaa laacibkan u aragta beddelka ...
Inter oo buuggeeda ku dhigatay xiddigaha Kolarov, Vidal iyo Darmian
Sadia Nour 17 days ago
Himilo ­­­­­­­­­­­­­­­­­– Inter Milan ayaa caafimaadka marsiineysa maalmaha soo aadan Aleksandar Kolarov oo ka imaanaay Roma, Arturo Vidal oo Barcelona ah iyo Matteo Darmian oo isaguna ka imaanaya Parma. Nerazzurri ayaa suuqa qiimo hoose ku bixineysa suuqa kala gadashada fasalkan,kaddib ...
Messi “Waan sii joogi doonaa Barcelona”
Ahmed Haadi 18 days ago
Himilo ­­­­­­­­­­­­­­­­­– Lional Messi ayaa ugu danbeytii sheegay inuu sii joogi doono Barca tan iyo xilli ciyaareedka danbe,kadib warkii naxdinta galiyay taageerayaasha Spain ee ka tagistiisa kooxda uu waqtigiisa galiyay ee Barcelona. “Waan sii joogayaa sabatoo ah madaxweynaha ayaa ii ...
Xiddiga Liverpool ee Gini Wijnaldum oo heshiis shaqsi la galay kooxda Barcelona
Ahmed Haadi 21 days ago
Himilo ­­­­­­­­­­­­­­­­­– Sida ay ku warameyso warbaahinta Spain ee Sport, kooxda Barcelona ayaa heshiis la gashay khadka dhexe ee Liverpool ninka lagu magacaabo Gini Wijnaldum. 29-jirkaan waxaa qandaraaskiisa hadda ee Reds kaga haray wax ka yar hal sanno, iyada oo ...
Man United iyo PSG oo doonaya in ay ku lacag ku bixiyaan Messi
Mahad Mohamed 28 days ago
Himilo – Manchester United iyo Paris Saint-Germain ayaa dalab rasmi ah ka gudbinaya weeraryahanka kooxda Barcelona Lionel Messi. Messi ayaa caalamka kaga argagaxsaday warka ah in uu ka tagayo Barcelona oo uu joogy tan iyo da’diisa 13-ka sanno. Cayaaryahanka ku ...
Massimo Moratti: Inter kama quusan doonto saxiixa Messi
Himilo – Madaxweynihii hore ee Inter Milan Massimo Moratti ayaa soo jeediyay in kooxda reer Talyaani aysan ka quusan doonin saxiixa xiddiga Barcelona Lionel Messi. Qandaraaska cayaaryahanka reer Argentine ayaa galaya sannadkiisii ugu danbeeyay iyada oo la tilmaamayo in uu ...
Chelsea oo £50m ku bixineysa Ben Chilwell
Himilo – Chelsea ayaa qarka u saaran in ay dhammeystirto saxiixa daafaca Leicester City Ben Chilwell oo ay ku bixineyso adduun dhan £50m. Iyada oo goor sii horreysay kooxda la wareegtay Hakim Ziyech iyo Timo Werner, Chelsea ayaa hadda dooneysa ...
Tuchel : Messi si weyn ayaan ugu soo dhaweynayaa PSG
Mahad Mohamed August 24, 2020
Himilo – Tababaraha Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ayaa sheegay in Lionel Messi si weyn loogu soo dhaweynayo kooxda xilli ay soo baxayaan wararka sheegaya in laacibka uu ka tagayo Barcelona. Messi ayaa la rumeysan yahay in ay markan dhab ka ...
Chelsea oo heshiis ka saxiixaysa Thiago Silva
Himilo – Chelsea ayaa ku dhaw saxiixa daafac dambeedka khibradda leh ee Thiago Silva sida ay tilmaamayaan warbixinno soo baxaya. 35 jirka ayaa kooxdiisa PSG ku hoggaamiyay kulankii kama dambeysta ee Champions League oo ay kahor yimaadeen Bayern Munich inkasta ...